आफ्नै दाइ ले बहिनीलाई यस्तो सम्म गर्यो, १६ लाख पैसाले के के गर्यो हेर्नुस्.(भिडियो सहित) - Mitho Khabar
June 28, 2021 Mitho KhabarLeaveaComment on आफ्नै दाइ ले बहिनीलाई यस्तो सम्म गर्यो, १६ लाख पैसाले के के गर्यो हेर्नुस्.(भिडियो सहित)
आफ्नै दाइ ले बहिनीलाई यस्तो सम्म गर्यो, १६ लाख पैसाले के के गर्यो हेर्नुस्.
यो पनि पढ्नुहोस: महामारीका कारण लगाइएको निषेधाज्ञाका कारण दिनहुँ क’माएर भोक मेटाउने विपन्न’हरुको जिवन निकै दुखद् छ । सरकारले म’हामारी फैलने क्रम रोक्न भन्दै निषे’धाज्ञा थपिरहेको छ । तर विपन्न र दैनिक ज्या’लादारी गरेर कमाउने र त्यसैले भोक मेटाउ’नेहरुका लागि भने प्रभावकारी का’र्यक्रम छैन । जसका कारण उनीहरुको बिचल्ली भएको छ । विपन्न, सुत्केरी र अनाथहरुको बिच’ल्ली भएको हो ।
मजदुर’हरुले काम गर्न पाएका छैनन् । जसका कारण उनीहरुको चुलो बल्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सामा’जिक रुपमा लागेका अभियन्ता’हरुले सहयोग गर्ने क्रम भने जारी छ । उनीहरुका कारण भोकै बस्नुपरेकाहरुले सड’कमै खान पाएका छन् । धेरै सामाजिक अभियन्ताले घरमा बनाएका खाना सडकमा आएर विपन्न’हरुलाई वितरण गर्ने गरेका हुन् ।
उनीहरुले गरेको सहयो’गको खाना खान हजारौंको लाइन लाग्ने गरेका छन् । त्यसरी अरुले दिएको सहयोगको खानेकुरा खान आउ’नेहरु कतिपय धरधरी रोएको देखिन्छ । साना बालबालिका लिएर आएका महिला’हरुको अवस्था निकै दयनिय हुन्छ । पौष्टिक खानेकुरा खानुपर्ने समयमा भोकै बस्नुपरेका बालबा’लिकाहरुको अनुहार निकै मायालाग्दो देखिन्छ । तर उनीहरुका लागि सरकारले विशेष का’र्यक्रम नल्याएको भन्दै आ क्रो शित स’मेत हुने गरेका छन् ।
पोखराका रामराज कार्की ४२ वर्षको उमेरमा महा:मारीमा संक्र’मित भएर निधन भयो । उनको १३ औं तिथिमा पठा’एको पैसा र केही खाद्यान्न संचार’कर्मी गंगा लामाले वि’तरण गरेकी हुन् । मनोज कार्की राम’राजको दाईले सह:योग पठाएको गंगाले बताएकी छन् । इताजाखबरबाट